जान्नुहोस् ! दैनिक उपभोग्य बस्तुको कति वढ्यो मूल्य – Samachar Pati
जान्नुहोस् ! दैनिक उपभोग्य बस्तुको कति वढ्यो मूल्य
१७ असोज l दसैंको मुख्मा खाद्यान्नसहित दैनिक उपभोग्य बस्तुको भाउ चर्को वृद्धि भएको छ । उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको चर्को मारमा परिरहँदा सरकार भने महंगी खासै नवढेको दावी गरिरहेको छ । के मा कति वढ्यो मूल्य ? यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले मूल्य वृद्धिको विवरणसहित छापेको छ ।
इन्धनको भाउ आठ महिनामा १० पटक वृद्धि भएको छ। पेट्रोल प्रतिलिटर १८ रुपैयाँ, डिजल र मट्टितेल १८–१८ रुपैयाँ वढेको छ। एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँ वढेको छ । चिनीको मूल्य १५ दिनमै प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ वृद्धि, आँटा प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँ वढेके छ ।
खानेतेलको मूल्य लिटरमा ४५ रुपैयाँसम्म, आलु धार्नीको दुई सय रुपैयाँ पुगेको छ । दूध–दही प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ वढ्यो भने मासको दाल प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, हरियो फर्सी प्रतिकिलो २० रुपैयाँ वढ्यो, तरकारीको भाउ अझ वढ्ने बताइएको छ ।
फुलबारी मन्टेसरी कटेजले ८ औं खेलकुद दिवस मनायो
कास्की जिल्लामा एक युवा मृत अवस्थामा फेला